Dharaaro Xasuustood Xasanow xoolodhaqasho iyo markaad xili ka weynaatid Saw dharaaro tegay xasuustood dib uma soo xigatid Maxamed | Salaan Media
Home Wararka Dharaaro Xasuustood Xasanow xoolodhaqasho iyo markaad xili ka weynaatid Saw dharaaro tegay...
Dharaaro Xasuustood Xasanow xoolodhaqasho iyo markaad xili ka weynaatid Saw dharaaro tegay xasuustood dib uma soo xigatid Maxamed Siciid Gees – Hargeysa Qeybtii 2aad
Xasanow xoolodhaqasho iyo markaad xili ka weynaatid
Saw dharaaro tegay xasuustood dib uma soo xigatid
Markii mucaaradku ku dhawaaqeen dib-u-habaynta SNM, ayaa Marxuun Madaxweyne Cigaal koox Wasiirro ah oo aan ka sii xasuusto Mudane Axmed Maxamed (Siilaanyo), Marxuun Maxamuud Saalax (Fagadhe), Axmed Xuseen Oomane, Cabdillaahi Xuseen Iimaan (Dareewal), Dr. Cabdi Aw Daahir iyo aniga [Maxamed Siciid Gees], ayuu u soo qoray waraaqo, ku bilaabmaya; ‘Ajandaha shirka waxa ugu horreeya inaan laga war helin shirkan.’ Shirka oo ka dhacaya Madatooyada afarta iyo badhka galabnimo. Sidaas ayaa Wasiir waliba isaga oo aan Maradiisa u sheegin iska daa cid kal oo ayaanu madaxtooyada waqtigii isku wada aragnay.
Madaxweyne Cigaal waxa uu ka hadlay qoladan sheeganaysa Dib-u-habaynta SNM iyo waxa laga yeelayo, maadama qolayada beelaha darafyada aanu aqoon fiican u lahayn jabhadda waxa doodii ka hadlay Wasiirradii SNM ahaan jiray oo uu fadhiyey Guddoomiyihii dhaqdhaqaaqa SNM ee ugu waqtiga dheeraa Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), waxa ay doodoodu u badanayd Golihii Dhexe ee SNM shir dambe may qabsan intii ka dambaysay ku-dhawaaqiddii gooni-isu-taagga Somaliland ee Shirweynihii Burco, Guddoomiyaheedii xamar ayuu qabtay, xubnihii Guddiga Dhexe waa kala tageen, ma jirto cid sheegan karta SNM jirta hadda. Nimankan sheeganayaa waa xubno ka mid ahaa, kuwa kalena xukuumadda iyo golayaasha iyo shaqaalaha iyo ciidammada qalabka sida ayey ka mid yihiin cidna keligeed ma sheegan karto.
Doodii qoladii Sta ahayd halkaas ayey la mareen. Qoladayadii kale waxa noogu dhiiranaa Maxamuud Saalax Fagadhe oo aqoonyahan sare ahaa oo hadal cad oo cidna ka xadhig xidhan oo muran badan oo weliba hirdinta madaxu ka soo horayso, ayaa hadalkii qaatay oo ku tiraabay; “Madaxweyne, shirkii Boorame ayaa lagu tirtiray wixii xisbi iyo jabhad la odhan jiray heer beelo ayaa lagu heshiiyey, waa maxay waxan dib loola soo baxay? Annaguna USP-dii ayaan ku noqonaa miyaa? Marba sheeko miyaa naloo keenayaa waxba kama jiraan Dib-u-haybanta SNM la sheegayaa.”
Wasiir Fagadhe halkaas ayuu maray jid ayuu u lahaa, hase yeeshee daw uma aanan arkin. Aniga ayaa u baxay hadalkii oo waxa aan idhi anoo xiganaya hadalkii Fagadhi; “Madaxweyne dagaalkii Daraawiishta Ina Cabdule Xasan waxa laga jooga boqol sanno, haddana weli Dhulbahante waa ay ka sii sheekaynayaan oo gabayadii iyo magacyadii sida khusuusiga ayey weli ku hadaaqayaan oo may ilaawin, sidaas oo kale Isaaq boqolka sanno ee soo socota waa ay ka hadlayaan SNM-ta iska daa inta kuwii asaasay wax ka sii nool yihiin oo hadda aynu joogno ah. Marka waxan ku talin lahaa inaan la inaga xigsan SNM-ta.”
Shirkii waa la soo gebegebeeyey ra’yi urursi ayuu ahaa sidaas ayuu ku dhammaaday. Waqti ka dib markii uu ii magcaabay Cigaal inaan noqdo Guddoomiyihii Guddiga Qabanbaabada iyo Yagleelka Ururkii UDUB ayaan ku guulaystay in Shirweynihii ururka uu Shirguddoonka ka mid noqdo oo uu soo fadhiisto isaga oo biladii UDUB sita, Sheekh Yuusuf Sheekh Cali Sheekh Madar Guddoomiyihii Dib-u-habaynta iyo Guddoomiyhii hore ee SNM-tu, halkaas ayuu ku go’ay hadal Dib-u-habayntu. Ayaan-darro, markii Marxuun Cigaal dhintay,dadkii xisbiga dhisayna laga eryey, qaarna iskaga tageen oo dad cusub iyo kuwa diidanaa oo waxba ka ogayni dhismihiisa ay qabsadeen ayuu galbaday.
Madaxdii SNM-ta inta xukuumadda gasha mooyee inta kale waxay u xuubsiibataa mucaaradnimo, sida Ururkii ASAD, KULMIYE, QARAN, UDHIS, iyo hadda oo Golaha Wadatashiga lagu dhawaaqay Waa dhismi kari waayeen ururro ama xisbiyo mucaarid ah oo aanay Madaxdii hore ee SNM-tu hoggaanka u hayn.
Waxa halkaas ka cad inaan ku jirno Boqolka sanno iyo SNM ciddii xukunka Somaliland qabata, waxa hor yaal qodabkaas iyo siday u maareeyan lahaayeen ayaay hawshiisu sugaysaa. Halgan kale oo dadka laga iibsho oo qaranimo ah oo aan SNM-ta iyo dadkii ka qaybgalay ahayn ma jiro. Waa mucaaradda ka soo jeeda xubnihii madaxda ka ahaa SNM-tu waxay dayr adag uga noqotay Somaliland afkaaraha xag-jirka ka soo jeeda Soomaaliya. Ururradii samaysmay waxa markii ka muuqanaya sawir beelood ilaa hadda waxa uun dadka isu keenayaa sawirkaas SNM-ta ee hore dad badan u mideeyey.